अफगानिस्तान, तालिवान र अमेरिकी असफलता
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको करिव २० वर्षपछि काबुलस्थित अमेरिकी विदेश विभागले महत्वपूर्ण कागजातहरू जलाउन बाध्य भएको छ । तालिवानको अकल्पनीय विजययात्रा काबुलसम्म आएको देख्नासाथ गत अगस्ट १५ तारिखको दिन आश्चर्यजनक ढङ्गले राष्ट्रपति अशरफ घनी देश छोडेर हिँडेसँगै अफगान जनताको तितो प्रतिक्रिया यस्तो सुन्न पाइन्छ । मैले मेरो भाग्य सर्वशक्तिमानलाई छोडेको छु, किनकि अब म कसैलाई विश्वास गर्न सक्दिनँ ।
उनीहरूले अफगान जनतालाई मूल्य, प्रगति, महिला अधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको बारेमा अनगिन्ती आश्वासन बाँडे । अफगान जनतालाई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुऱ्याएर अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेको केवल ४५ दिनभित्र ‘तालीबानी’हरूले बिनारक्तपात काबुलमा झण्डा फहराउन सफल भएसँगै अमेरिका र अफगान सरकारको सबै सपना र दाबीहरू खोक्रो साबित भयो ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सरकारले अकल्पनीय क्षति र नमिठो हार ब्यहोरेको घटनालाई दुनियाँले भियतनाम युद्धसँग दाँजेसँगै अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भनेका छन्- हामी २० वर्षपहिला अफगानिस्तान जानुको उद्देश्य ९/११ घटना दोषीलाई सबक सिकाउनु मात्र थियो । जसमा हामी पुर्ण रूपमा सफल भएका छौँ ।
अमेरिकी युद्ध शृङ्खला ‘होमल्याण्ड’को आठौँ र अन्तिम सिजनको पहिलो एपिसोडको रूपमा वर्तमान घटना पूर्वनिर्धारित थियो । यस प्रकरणमा, पूर्वसीआईए निर्देशक र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार साउल बेरेन्सन अफगानिस्तान सरकार र तालिवानबीच शान्तिसम्झौता गराएर अमेरिकी सेनाहरू घर फर्काउन चाहन्थे । दुर्भाग्य ! साउलको कोसिसले आकार लिन नपाउँदै कथाले अर्कै र अनियन्त्रित मोड लियो ।
अफगानिस्तानबाट सम्मानपूर्वक निस्कने तयारी गरिरहेको बाइडेन प्रशासन यतिबेला नमिठो पराजय र अकल्पनीय आर्थिक, भौतिक र राजनीतिक क्षतिको ‘क्यालकुलेसन’ गर्न विवश छ । करिव दुई दशक लामो अफगानयुद्धमा अमेरिकाले ८५० बिलियन डलर धनराशि आगोमा हालेको छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्- २० वर्षमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा खरानी बनाएको रकम पछिल्लो २० सालको अफगानिस्तानको कुल जिडिपी भन्दा धेरै थियो । यति धेरै रकम आगोमा फुकेर मधुरो, थकित र अपमानित अनुहार लिएर घर फर्किंदा अमेरिकाले के पायो भन्ने बुझ्न यस कथाको जगमै फर्कनुपर्नेछ ।
सोभियत सेनालाई अफगानिस्तानबाट लखेट्नको निम्ति पश्चिमी मिडिया ओसामा बिन लादेनलाई शान्तिदूत भन्ने गर्थे । लादेन जन्माउने बाध्यताको जस्टिफाई गर्न नसकेर सम्पूर्ण कथा नै अवास्तविक बनाउने अमेरिकी बाध्यता छताछुल्ल भएको छ । अफगानभूमिमा रुसले खाएको धक्कालाई अनदेखा गर्दै लडाइँको अन्तिम परिणाम आफ्नै पक्षमा हुने कल्पनाबाट हौसिएको फल उसले पाइसकेको छ । अफगानिस्तानमा उसले गुमाएको बहुमूल्य अन्तर्राष्ट्रिय छविको भरपाई कसरी गर्ने ? भन्ने विचारसमेत गर्न नभ्याएको समयमा विश्व राजनीतिले अमेरिकी प्रशासनको असफल युद्धनीतिको चिरफार जरुर गर्ने छन् ।
अफगानिस्तानको दुर्दशाको कथा आज लेखिएको थिएन । दुई दशकदेखि तालिवानले गरिरहेको लडाइँको जग तीन दशकपहिले नै राखिएको थियो । जतिबेला सोभियत सङ्घको तागत, हिम्मत र इच्छा बुलन्द थियो । साम्यवादी सिद्धान्तलाई अनदेखा गर्दै साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो साम्राज्यको विस्तार गर्न हौसियो । कथा १८औँ शताब्दीको अन्त्यबाट शुरु भएको हो । बेलायतले अफगानिस्तानलाई आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक हितको रूपमा प्रयोग गरेको थियो । रुसमा जारको शासन थियो । रुस र बेलायत आपसमा लडिरहेका थिए र युद्धको मैदान अफगानिस्तान थियो । रसिया अफगानिस्तानको माध्यमबाट आफ्नो सीमाना बढाउन चाहन्थे र अङ्ग्रेजलाई डर थियो कि एकपटक अफगानिस्तान रुसी कब्जामा आएपछि भारतको हातमा जान धेरै समय लाग्दैन । यो कहानी लेनिन नेतृत्वको अक्टोबर क्रान्तिपछि केही वर्ष रोकियो तर शीतयुद्ध समयमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सिको गर्दै साम्यवादी सोभियत सङ्घ अन्ततः अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेरै छोड्यो ।
रुसले अफगानिस्तानमा आफ्नो खुट्टा फैलाउन थाल्यो । अफगानिस्तानको उत्तरमा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानको सीमाना थियो । रुस बिस्तारै अफगानिस्तानको राजनीतिमा प्रवेश गर्न थाल्यो । रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव लियोनिद ब्रेझनेभको सक्रियतामा अफगानिस्तानका पाँचौँ प्रधानमन्त्री र तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खानसँगको बैठक निकै सफल भयो । कूटनीतिक बैठक लामो मित्रतामा परिणत भयो । अफगानिस्तानमा रुसको पकड बलियो हुन थाल्यो ।
तर, यो अमेरिका र पाकिस्तान दुवैलाई स्वीकार्य थिएन । दुवै पृष्ठभूमिमा सँगै काम गरिरहेका थिए । पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी आइएसआई र अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआईए मिलेर दाउद खानको शक्तिलाई कमजोर गर्न र उसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मिलेर काम गरिरहेका थिए । यसैबीच, रुसको सहयोगमा अफगानिस्तानमा कू भयो । मोहम्मद दाउद खानको हत्या भयो । अफगानिस्तानमा एक कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको थियो, जो रुसी शक्तिको नजिक थियो ।
अफगानिस्तानमा रुसको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न अमेरिकाले पाकिस्तान र मुजाहिद्दीनहरूलाई सबै किसिमको सहयोग उपलब्ध गरायो । अफगानभूमिबाट रुसी सेनालाई फिर्ता पठाउन अमेरिकाले ओसामा विन लादेनको जन्म गरायो । अर्बौं डलर खर्च गरेर तयार पारिएका तालिवानका मुजाहिद्दीनहरू अमेरिकाबाट पाकिस्तान जाँदै थिए र उनीहरूले रुसी सेनालाई मात्र बाहिर निकालेका थिएनन्, तर अफगानिस्तानको शक्तिलाई पनि हल्लाएका थिए । अमेरिका अन्ततः आफ्नो चालमा सफल भयो । अफगानिस्तानको सुन्दरभूमिलाई युद्धको मैदानमा बदल्न अमेरिकाले कुनै कसर राखेन ।
अफगानिस्तानको भूमि भयङ्कर युद्धको चपेटामा पारियो । अमेरिकासमर्थित मुजाहिद्दीन र रुसी सेना आमनेसामने थिए । सन् १९७९ देखि करिव एक दशक रसियाले अनेकौँ हन्डर र ठक्कर खाएपछि अफगानिस्तानबाट अपमानित हुँदै घर फर्कियो । तर कथा अमेरिकाले चाहे जस्तो भएन । तालिबान, जसलाई अमेरिकाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उठाएको थियो । उसले कल्पनासम्म गरेको थिएन कि एकदिन तालिवानले ढाडमा टेकेर आफ्नै टाउकोमा हान्ने छ । आखिर भयो त्यही, जुन अमेरिका कदापि चाहँदैनथ्यो । अमेरिकीभूमिमा इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक र सबैभन्दा विनाशकारी हमला उनीहरूले अन्जाम दिएरै छोडे ।
ओसामा विन लादेन ! जसलाई अमेरिकाले जन्माएको थियो । जसको बारेमा एक समय पश्चिमी मिडियामा हेडलाइन यसप्रकार थिए– ‘विरोधी सोभियत योद्धा शान्तिको बाटोमा आफ्नो सेना राख्छ’, तिनै ओसामा विन लादेन जसले अमेरिकाको सान वल्र्ड ट्रेड सेन्टरलाई हवाई हमलामार्फत माटोमा मिलाइदिए । हो त्यही घटना थियो । जसले अमेरिकालाई अफगानिस्तान जान बाध्य पा¥यो । कुनै समय आफैले जन्माएको, हुर्काएको, प्रशिक्षित गरेको तालिवान मुजाहिद्दीनहरू जो पहिले अमेरिकाका साथी थिए । त्यसपश्चात् सबैभन्दा ठुलो शत्रु बनेका छन् । तालिवानको नजरमा अमेरिका, सीआईए, पेन्टागन सबैभन्दा ठुलो सर्प तब बन्न पुग्यो जब अमेरिकी सेनाले ओसामा विन लादेनको हत्या पाकिस्तानको एबटावादमा गरिदिए । लादेन त मारिए तर अमेरिकाले चाहेजस्तो तालिवान र अफगानिस्तान आफ्नो कब्जामा आएन ।
अमेरिका आफैले जन्माएको दुश्मनलाई सफाया गर्न नसकेर मुर्छित बन्न बाध्य भयो । इतिहास र कहानी आफैले चाहे जस्तो र लेखेजस्तो नहुने बुझ्न राजी त भयो तर नोक्सानको हिसाब गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रियो । अमेरिका अब चाहेर पनि नयाँ युद्धको कल्पना गर्न सक्दैन । जितेर सबै गुमाएको अर्को नमिठो अफगान युद्धमा अपूरणीय क्षति, सधैँ दुःखी राख्ने घाउ, आफन्तको लास, मृत्यु, विनासको इतिहास लिएर घर फर्किएको अमेरिका एक पटक सोच्न बाध्य हुँदै छ । आखिर कथामा कमजोरी कहाँ थियो ?
यसको मतलब अमेरिका अब चुपचाप सुत्नेछ भन्ने कदापि होइन । उसले बुझेको छ । चुनौतीहरू थपिएका छन् । रूप बदलिएको छ । सन् २००१ भन्दा पहिले अफगानिस्तानको तालिवानशासित शासनअन्तर्गत सिर्जित चरमपन्थी र विश्वव्यापी आतङ्वादको नयाँ एपिसोड अमेरिकाले ब्यहोर्ने छ । अमेरिकाको कमजोरी, सोच, चिन्तन र व्यवहारको कारण अफगानिस्तान अमेरिकीविरोधी शक्तिको निम्ति महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्ने खतरा झनै उकासिएको छ । अमेरिकी नजरमा आतङ्कवादी शक्ति बनेको तालीवानसँग रुस र चीनले राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न राजी हुँदा अमेरिकाको लागि अर्को टाउकोदुखाइ बन्ने निश्चित छ ।